Xubno Ka Tirsan Shabaab Oo Lagu Dilay Degmada Dharkenley. - Awdinle Online
Xubno Ka Tirsan Shabaab Oo Lagu Dilay Degmada Dharkenley.
Ciidamada ammaanka ayaa maqribnimadii hore ee caawa degmada Dharkenley ee gobolka Banaadir ku toogtay laba nin oo hubeysnaa, kuwaas oo la rumeysan yahay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Inta aysan ciidamadu toogan labadaas nin, ayaa waxaa la sheegay inay dileen nin ganacsade ahaa oo lagu magacaabi jiray Daahir Maxamed Gaab.
Sidoo kale kooxdan ayaa la aaminsanyahay inay fuliyeen dilal isla degmadaas Dharkenley loogu geystay ganacsade kale oo lagu bagacaabi jiray Axmad Dheere iyo sidoo kale wiil Dhakhtar ahaa oo caan ka ahaa degmada Dharkenley.
Laamaha amaanka dowladda Soomaaliya weli wax faahfaahin ah kama aysan bixin dhacdadaas.
Shaqaaqadan ayaa kusoo aadeysa iyadoo bandow habeenkii ah uu saaranyahay magaalada Muqdisho.
Toddobaadyadii dhowaa, kooxaha dilalka ka gaysta magaalada Muqdisho ee Al-Shabaab ayaa sii yaraanayey, waxaana kuwooda ku guuleysta inay dilal fuliyaan dhacday marar badan in ayagana la dilo ama la qabto
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo xilka ka qaaday labo ka mid ah Guddoomiye kuxigeenad G/Banaadir
Next articleMadasha Xisbiyada Oo War Cusub Kasoo Saartay Xaaladda Dalka